Mac Otakara Anoti iPhone 7 Haizove Ne Smart Connector | IPhone nhau
Mac Otakara Anoti iPhone 7 Haizove Ne Smart Connector
Pakati peguhwa dzinotiudza nezve iyo iyo iPhone 7 ichave yakaita, mumwe anovimbisa kuti inotevera apple apple inosanganisira iyo Smart Connector, smart connector yakaunzwa neApple padivi peiyo 12.9-inch iPad Pro munaGunyana apfuura. Nhasi, Mac Otakara, svikiro rakatoburitsa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zveApple munguva yakapfuura, anoti kwete, kuti Tim Cook nekambani havana kuronga kuvhura, zvirinani gore rino, iyo iPhone ine Smart Connector.
Iyo Smart Connector irudzi rutsva rwechiteshi chakagadzirirwa chinja data uye simba panguva imwe chete. Ndeipi basa ringaite Smart Connector pa iPhone? Kutenda kwakapararira kwazvo ndekwekuti yaizoshandiswa pakufukidza uye nemamwe marudzi ezvishongedzo zvehungwaru, asi ini pachangu handina kumbobvira ndanyatsojekesa nezvazvo.
iPhone 7: Smart Connector kana kwete?
Kekutanga iyo iPhone 7 ine Smart Connector yakataurwa nezvayo yaive nekuda kwekuti yapfuura mufananidzo wakaonekwa paInternet. Asi iwo mufananidzo hausiwo wega waisanganisira iyo nyowani yekubatanidza, kana zvisiri takaonawo imwe ichipa .
Sekureva kwaMac Otakara, Apple yakafunga kusaisa iyo Smart Connector muiyo iPhone 7 mushure mekuongorora kuiswa kwayo, asi zvinokwanisika kuti vangadai vasina kumbozvifunga. Dai vaifanirwa kushandisa ichi chinongedzo pane iyo iPhone, zvingadai zvakajairika kuti itariswe kutanga pane iyo iPhone 7 uyezve inozoverengerwa muiyo iPad, sezvavakaita nezvimwe zvakatarwa seRetina Ratidza, Siri kana Kubata ID.
Unofungei? Iyo iPhone 7 ichave ine Smart Connector kana kwete? Iwe unofunga kuti ndeipi basa raunogona kunge riri pane iPhone?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mac Otakara Anoti iPhone 7 Haizove Ne Smart Connector
TSMC iri kupedzisa dhizaini yeA11. Ichave iri 10nm uye ichave yakagadzirira kutanga kwa2017
Ungano inotora yechipiri basa kubva kuIOS 10